I-Siem Reap yamkela abakhenkethi baseTshayina ngezandla ezivulekileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » I-Siem Reap yamkela abakhenkethi baseTshayina ngezandla ezivulekileyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseCambodia • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Amagosa ezoKhenketho e-China abona ukuba umhlaba ugcwele ngokuchasene nabakhenkethi baseTshayina kwaye benze uhambo lube liphupha kubaninzi. Igosa laseTshayina lithetha malunga neentlanga ezingenabungane eziphendula kakhulu.
EMzantsi Korea, imiqondiso iqalile ukuvela kwiifestile zevenkile yokutyela isithi, "akukho mTshayina uvumelekileyo." Indawo yokungcakaza kweli lizwe elungiselelwe iindwendwe zakwamanye amazwe yathi ayisamkeli amaqela abakhenkethi abavela e-China. Ngaphezulu kwesiqingatha sesigidi sabantu abasayine uxwebhu lwezikhalazo, olungeniswe kurhulumente, befuna ukuba kuvalwe iindwendwe ezivela kwilizwe elikufuphi le-1.4 yezigidigidi.
Inkulumbuso yaseCambodian uHun Sen ngoLwesibini uthe amanyathelo athintelayo ngamanye amazwe ukuthintela ukuqhambuka kwenoveli coronavirus kubangela ucalucalulo kunye noloyiko, "olunobungozi ngaphezu kwenoveli coronavirus uqobo", ngokweXinhua.
Ezinye iihotele kwiPhondo laseIndi Reap (emantla ntshona eCambodia) azamkelanga kuphela abakhenkethi baseTshayina kodwa babanike nesaphulelo. Abantu baseCambodia ababacalucaluli abakhenkethi baseTshayina kunye nabatyali mali.
Phantse abaninzi Chinese ityelelwe ngeenjongo zeshishini njengokonwaba kunyaka ophelileyo, ngokwengxelo, okanye i-936,000 kunye ne-1.08 yezigidi.
Abakhenkethi baseTshayina babenxibe iimaski eziluhlaza eziluhlaza njengoko babetyelele amabhodlo eAngkor Wat, ahlala epakishwe ngabakhenkethi baseTshayina ngexesha leholide yoNyaka oMtsha kodwa bekuthe cwaka kule veki iphelileyo.
NgoLwesibini, ngaphezulu kweenkampani ezingama-300 zaseLao zinikele ngaphezulu kwe- $ 500,000 kumnyhadala eLaos ukuxhasa umlo wase China ngokuchasene nobhubhane we-coronavirus kwaye kwangaxeshanye bamkela iindwendwe zaseTshayina.
Inkulumbuso yaseMalaysian uMahathir Mohamad uthe urhulumente waseMalaysian uza kubonelela ngoncedo, xa kufuneka, ngohlobo lokutya kunye nezinto eziyimfuneko kunyango lwephondo laseHubei, eyona ndawo ingubhubhani kunye nezinye iindawo e China.
EDenmark, uMzi wommeli wase-China ucele iphepha-ndaba lase-Jyllands-Posten ukuba lixolise ngomfanekiso wekhathuni obonisa iflegi yase China enophawu lwentsholongwane endaweni yeenkwenkwezi ezibomvu.
Abo banemvelaphi yaseTshayina, kodwa hayi abavela eTshayina, nabo baye bahlangatyezwa ngempendulo ebukhali. ESri Lanka, iqela labakhenkethi abavela eSingapore- apho uninzi lwabantu lunemvelaphi yaseTshayina- bathintelwe ukunyuka umtsalane walapha e-Ella Rock ngenxa yenkangeleko yabo, ngokukaTucker Chang, 66, omnye wabakhenkethi. Akukho namnye kweli qela wayenembali yokuya eChina kutshanje.
E-France, umphathiswa wezangaphandle wacebisa izikolo kunye neeyunivesithi ukuba zilumise utshintsho olwenziwe phakathi kwabafundi ne China. Ubuncinci isikolo esinye esiphakamileyo eParis sarhoxa kwizimemo kwiqela labafundi elizimisele ukufika kule veki.
ECanada, abazali kwiindawo ezihlala emantla eToronto baqala uxwebhu lwezikhalazo becela ukuba abafundi banyanzelise abafundi abasandula ukubuya e-China ukuba bahlale ekhaya ubuncinci iintsuku ezili-17 ukunqanda naliphi na ithuba lokusasaza esi sifo. Isikhalazo siqokelele phantse i-10,000 sayina kuloo ndawo, eneqela elikhulu labantu baseTshayina nabaseAsia.